के सम्भोग व्यायाम पनि हो ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home स्वास्थ्य के सम्भोग व्यायाम पनि हो ?
के सम्भोग व्यायाम पनि हो ?
ओछ्यानमा पसिना आउने गरी सेक्स गर्दा ठूलै व्यायाम गरेको अनुभूति हुन सक्छ । जोडीसँग गरिने यौन कार्यलाई दैनिक ३० मिनेटको व्यायाम भन्न मिल्ला र ?
सेक्स र हस्तमैथुन आनन्ददायीमात्रै हुन सक्दैनन्, स्वास्थ्यका दृष्टिले फाइदाजनक हुन्छन् र व्यायामसंग तुलना पनि गर्न सकिन्छ । वास्तवमा सेक्सका क्रममा हुने शारीरिक प्रतिक्रियाहरु व्यायामसंग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । सन् १९६० मा गरिएको एक अध्ययनले पनि यौन प्रक्रियामा नियमित सहभागी हुने जोडीको श्वासप्रश्वास, मुटुको चाल र रक्त प्रबाहको दरमा वृद्धि भएको पाइएको थियो । यस्तो स्वास्थ्य लाभ गर्न जोकोहीले पनि छुट्टै व्यायाम गर्नुपर्छ । ‘तर सेक्स गर्दा नै यो फाइदा मिल्छ भने किन सेक्सबाट यो फाइदा नलुट्ने ?’ केही विज्ञरुको तर्क छ ।
पछिल्ला दिनमा यो अध्ययनको नतिजालाई वैज्ञानिकहरुले फेरि दोहो¥याएका छन् । यौन कार्यले मुटुको चाल तथा रक्तचापजस्ता शारीरिक तनाव वृद्धि गर्ने केही अनुसन्धानकर्ताले औल्याए । तर मनोवैज्ञानिक तनाबको तह अनियमित भएको पछि खुलासा भयो । यौन गतिविधिको औसत समय (३३ मिनेट) न्यून तनाब तहमा खर्चिएको अध्ययनले देखाएको थियोे ।
क्यानडाका जोडीबीच गरिएको एउटा अध्ययनमा छोटो अवधिमा गरिने यौन गतिबिधि औसत व्यायाम, फटाफट हिडे बराबर हुने पत्ता लागेको थियो । त्यसो भए यौन एउटा व्यायाम हो त ? विज्ञहरु भन्छन, यो व्यायाम हो र होइन पनि । यो तपाईंको व्यायामको परिभाषामा भर पर्छ ।
यदि तपाइको मनौविज्ञानलाई परिबर्तन गर्छ भने यो सेक्सको पाटो हो । तर व्यायामले मानिसको शारिरिक पक्रियामा हुने परिबर्तनलाई उत्तेजित गर्छ भने यो व्यायाम होइन ।
माशंपेशीजन्य स्वास्थ्य व्यक्तिको स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण तत्व हो । प्रतिरोधी तालिम र अन्य व्यायामबाट स्वस्थ मांसपेशी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा हामीलाई धेरै थाहा छ । तर के मांसपेशीय स्वास्थ्य परिवर्तन गर्न सेक्सले पर्याप्त व्यायाम प्रदान गर्छ त ? यसबारे अन्य अध्ययन हुदैछ ।
हस्तमैथुनबाट कत्तिको व्यायाम हुन्छ त ? यसले मुटुको चाल बढाउने र सिस्टोलिक रक्तचाप बढाउने उल्लेख गरिएको छ । तर सेक्समा जस्तो व्यायाम हस्तमैथुनबाट मिल्दैन । बरु यसलाई हल्का व्यायाम जस्तै हिडडुलसँग तुलना गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा व्यायाम सेक्सका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।
राजधानीमा नेताका भब्य महल जनता अझ पाल मुनी
चीन-सागर विवादवारे नेपालमा छलफल